Rajoelina sy Ravalomanana : Miandry inona amin’ ny vahoaka -
AccueilSongandinaRajoelina sy Ravalomanana : Miandry inona amin’ ny vahoaka
Rajoelina sy Ravalomanana : Miandry inona amin’ ny vahoaka
18/01/2018 admintriatra Songandina 0
Very maina ny antso izay nataon-dRavalomanana tamin’i Andry Rajoelina manoloana ny fiantsoana fiarahana hiara-hiasa, hiady amin’ny fanjakana izay mijoro ankehitriny. Hatramin’izao mantsy dia mihanjahanja irery Ravalomanana Marc, satria dia araka ny filazan’ny tanora dia ny hoe niala maina sy nanao antso an’efitra i Ravalomanana Marc tsy nasian-dRajoelina sira. Atao ahoana tokoa ny hiarahana amin’ny filoham-pirenena teo aloha izay efa fantatra ny nataony, tsy lazaina fotsiny ohatra ny fitononany tena ho filoha ny fibodoana irery ny fivarotana PPN, na ny entana andavanandro izay ilain’ny Malagasy, ary jadona izay niainana teto nandritra ny fotoam-pitondrany. Na dia filoham-pirenena nametraka didy jadona izay aza i Ravalomanana, dia voazeran’i Rajoelina indray, ary ity farany ihany koa izay nanao ny nataony, satria teo ny ampihimamba ny fananam-pirenena, ary nandefa ny firenena tao anatin’ny lavaka mangitsokitsoka an’i Madagasikara tao anatin’ ny 5 taona. Tsy tokony hohadinoin’ny rehetra ihany koa ny fifandonan’ny roa tonta, izay niteraka ny zava- nitranga ny 7 febroary, izay namoizana ain’olona maro.
Hiaraha-mahalala fa fetsy tokoa Ravalomanana, satria nandritra ny fito taona izy no nitantana ny firenena nefa tsy nanao afa-tsy ny fitadiavam-bolany, sy nampandeha ny orinasany. Taorian izay ihany koa dia hiarahan’ny rehetra mahita ny fahatongavan’i Rajoelina, izay naka ny fahefana teo am-pelatanan’i Ravalomanana, ary ity farany dia nanao izay nataony ihany koa. Tsy misy hanavahana azy fa dia samy mpanongam-panjakana no samy tia tena tokoa ireo olona roa voalaza ireo, ary samy tsy misy miraharaha afa-tsy ny volabeny amina miliara avy. Ny nanaitra dia ny hoe hiara-dalana Ikotofetsy sy Imahaka, izay ny iray filoham-pirenena nataon’ny mpikosoka kapila tsinontsinona manoloana ny tany aman-danitra. Dia azo hinoana tokoa ve fa hisy ny fiarahan’ny roa tonta, na ny fiarahan-komana. Tsy adala tokoa ny vahoaka ka hino ny resa-be tahaka izany. Matimaty foana tokoa ve izany ny zava-nitranga ny taona 2002, satria dia hoe mpinamana ny roa tonta.